4 lakilen'ny fampakaram-bady tonga lafatra | Bezzia
Maria vazquez | 08/09/2021 10:00 | fampakaram-bady
Inona no ilaina mba hahatonga ny fampakaram-bady tonga lafatra? Betsaka ny zavatra hanapa-kevitra, olona maro hifandraisana, ka tsy misy hahagaga ny olona fa mihamaro ny olona manakarama ny serivisin'ny orinasa iray. manam-pahaizana momba ny drafitra fampakaram-bady na ny mpanamboatra mariazy.
Ny iray amin'ireo lakilen'ny fankalazana ny fampakaram-bady tonga lafatra dia ny lmitazona fandaminana feno fandinihana isaky ny fanomanana. Satria ankoatry ny faniriana sy hafanam-po dia misy toetra hafa ilaina hiatrehana io asa teo aloha io toa ny faharetana sy ny fandaminana. Misy vitsivitsy ny lakilen'ny fampakaram-bady tonga lafatra ary maro ny miaraka amin'izay.
1 Gadona tsara
2 Ilay toerana mety
3 Ny antsipiriany
4 Ireo vahinin'ny mariazy
Ny fandaminana tsara dia fanalahidy mba hahatongavan'ny andro mariazy ny zava-drehetra dia miasa toy ny milina misy menaka tonga lafatra. Ny tsy tokony hiandrasan'ny vahiny eo amin'ny toeram-pisakafoana ela loatra vao hahatongavan'ny mpampakatra, fantatr'izy ireo hoe aiza no alehany amin'ny fotoana rehetra, fa tsy misy fotoana fiandrasana be loatra eo anelanelan'ny lovia na rehefa vita ilay fanasana na ny fankalazana afaka mody haingana araka izay azo atao ny olon-drehetra dia fanalahidin'ny fampakaram-bady tonga lafatra.
Betsaka ny zavatra tokony ho raisina ary sarotra ny miala sasatra amin'ny fampakaram-bady ary ankafizo raha toa ka mila mahatsapa ireo zavatra rehetra ireo amin'ny olona voalohany ianao. Noho izany dia mihabetsaka ny olona no miloka amin'ny fanendrena sy fananana olona manam-pahaizana amin'ny fandaminana eo anilanao amin'ny andro iray manan-danja toa an'io. Mora azo izany, sa tsy izany?
Ilay toerana mety
Aiza no hatao ny fampakaram-bady? Ity dia iray amin'ireo fanapahan-kevitra lehibe indrindra fa miatrika ny mpampakatra. Mazava matetika ny mpivady momba ny karazana lanonana tadiavin'izy ireo, na fampakaram-bady na fampakaram-bady, saingy tsy dia hoe aiza loatra no tian'izy ireo hankalazana izany sy ny fanasana manaraka.
Hatramin'ny taona vitsy lasa izay, mora kokoa ity fanapahan-kevitra ity. Nihena ny lanonana nanomboka tamin'ny fitsarana ka hatrany am-piangonana ary tao amin'ny hotely sy hotely fisakafoanana lehibe no nanaovana fanasana. Androany, na izany aza, tsy misy farany ny azo atao: toeram-piompiana, trano fiompiana, zaridaina…. misy ho an'ny mpivady rehetra.
Ny filamatra dia ny filokana toerana iray ahafahan'ny tsirairay mahazo aina; samy sipa sy vahiny isika. Inona no takatsika amin'ny fampiononana? Aza mahatsiaro ho diso toerana na be loatra; ataovy izay hahatonga azy ireo hahatsiaro ho maivamaivana avy hatrany.
Ankoatra izany, raha tsy azo idirana ny toerana iray, tsy maintsy omentsika ny vahinintsika ny fomba hahatongavana amin'izany. Manakarama serivisy aotobisy izay afaka mitondra ny vahiny mankamin'ny fanasana voalohany, ary avy eo, amin'ny faran'ny fanasana, dia mody any an-tranony.
Tena ilaina ny antsipiriany ary afaka manova toerana. Ny voninkazo sy ny jiro angamba no roa amin'ireo manandanja indrindra amin'ny haingo fampakaram-bady. Samy manana ny fahaizany manaova toerana malalaka sy mahaliana kokoa.
Ilaina eo amin'ny latabatra ny voninkazo. Ny tsara indrindra dia afangaroy ny foibe ambany sy avo mba hanomezana hetsika; ka natolotr'ireo izay mahatakatra an'ity zavakanto ity. Ary raha tery ny teti-bola dia azonao soloina ravina maitso foana ny voninkazo.
Ny jiro dia fanalahidy, ankoatry ny fanaovana toerana malalaka sy mahaliana kokoa, mba hampifanarahana azy amin'ny ora samihafa isan'andro. Ilaina ihany koa ny jiro tsara Makà sary tsara. Ary singa fiarovana ihany koa izy io. Raha amin'ny alina ny fanasana, dia tsy maintsy ataontsika izay hahitan'ny vahiny ny làlana nohazavaina rehetra.
Ireo vahinin'ny mariazy
Amin'ny fampakaram-bady dia laharam-pahamehana ny vahiny. Tsy maintsy mahazo aina izy ireo amin'ny fotoana rehetra, mahafantatra ny toerana haleha, ny fomba sy ny fotoana hahatongavana any. Ho fanampin'izany, tsy maintsy manome, araka izay azo atao, ny mombamomba ny tanàna amin'ireo izay mandeha ary, araka ny efa nolazainay, ny fomba hahatongavana sy hivoahana amin'ny fampakaram-bady raha tsy toerana mora idirana ity.
Raha te hanana a antsipiriany miaraka amin'ireo vahiny Ny filamatra dia ny filokana amin'ny zavatra azo ampiharina izay hampiasain'izy ireo amin'ny fampakaram-bady na any an-trano. Miresaka espadrilles, mpankafy, takelaka, fehiloha isika ... arakaraka ny vanim-potoana hanambadianao dia hahomby kokoa ny iray na ny iray.
Miresaka foana momba ny vahiny izahay ary izany no izy safidio tsara ny vahiny ary avelao izy ireo hifalifaly Izy io dia iray amin'ireo lakilena ilaina amin'ny fampakaram-bady tonga lafatra. Ary amin'ny fisafidianana tsara dia midika hoe fanasana ireo izay mahazo aina antsika. Ny fampakaram-bady dia ho lasa andro manan-danja, tsara tarehy nefa mitebiteby be, noho izany dia tsara kokoa ny manodidina azy tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » fampakaram-bady » 4 lakilen'ny fampakaram-bady tonga lafatra